ခံစားမှု့သံစဉ်: October 2010
Posted by blackroze at Wednesday, October 20, 2010 13 comments
ကျမ ဒီနိုင်ငံကို စရောက်စကပေါ့ မနက်အလုပ်ချိန် 8နာရီကနေညနေ 53း0ထိ အဲဒီအလုပ်မှာစလုပ်ပါတယ်
မနက်တိုင်6းနာရီ အိပ်ယာကထရပါတယ် 7နာရီဆို အိမ်ကထွက်ရပါတယ် အလုပ်က မနက်8နာရီတက်မှာ
ဆိုတော့ နောက်ကျလို့ မဖြစ်ပါဘူး အမြဲတမ်းကားမှတ်တိုင်မှာ ကျမနဲ့ ရွယ်တူ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့
ဆုံနေကြပါ ကျမစိတ်ထင် သူ့ကိုလဲကျမလိုဘဲ မြန်မာပြည်ကလာတယ်လို့ ထင်ပါတယ် နေ့တိုင်းတွေ့ နေကြ
ဆိုတော့ မျက်မှန်းတန်းမိလာပါတယ် တွေ့ရင်ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်နေကြပါ ကျမလဲသူ့ ကိုစကားသွားမပြောဖြစ်
သလို သူကလဲ လာမပြောပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကျမရောက်ပြီးလို့ သူမရောက်သေးရင် သူ့ကိုမျှော်မိတတ်သလို
သူရောက်ပြီး ကျမ မရောက်သေးရင်လည်း သူကလည်း မျှော်နေမိတာတဲ့လေ (နောက်တော့ သူပြန်ပြောပြတာပါ)..။။ အဲလိုနဲ့လနဲနဲကြာလာတော့ ကျမကဘဲစခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် တစ်မနက် ကားဂိတ်မှာ တွေ့တာနဲ့ ကျမကဘဲစပြီး မြန်မာလို နှုတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ် အဲမှာသူက နားမလည်ဘူး ဆိုပြီးခေါင်းခါပြတယ် တော်တော်အားနာ သွားမိတယ် ။
ကျမကသူ့ ကိုမြန်မာလို့ ထင်နေတာလေ အဲဒါနဲ့ တရုတ်လိုဘဲ ဘယ်ကလဲလို့ မေးလိုက်ပါတတ် သူကဗီယက်နမ်က လာတာတဲ့လေ ကျမကိုလည်း ဘယ်ကလာတာလဲလို့ ပြန်မေးပါတယ် ကျမက မြန်မာပြည်က လာတာလို့ ဖြေလိုက်ပါတယ် ။ ကျမနဲ့သူနဲ့ စတွေ့ပုံလေးက ရိုးစင်းပါတယ် နောက်တော့ဖုန်းနံပါတ် အပြန်အလှန်ပေးရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်..။။(တိုက်ဆိုင်တာက သူကလဲအဲနေ့မှာ ကျမကိုစကားစပြောမယ်လို့ စဉ်းစားထားတာတဲ့လေ)။ သူကဗီယက်နမ် ဟနွိုင်းကလာတာပါ ကျမနဲ့သူတနေရာစီပါ ဒါပေမဲ့ ရေစက်ရှိတယ်ဘဲ ပြောမလားမသိပါဘူး မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေ ထက်တောင် သူနဲ့ပိုခင်ပါတယ် နောက်တော့အလုပ်မတူပေမဲ့ သူအားတဲ့ရက် ကျမအားတဲ့ရက် အပြင်ထွက်လည်နဲ့ ကျမရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း တယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် တယောက်ခံစားချက် ကိုတယောက နားထောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ကျမရဲ့အကြောင်းကို မိသားစုကလွဲရင်သူအသိဆုံးပါ (မိသားစုဝင်တွေမသိတဲ့ ဒိုင်လျှိုကိစ္စလေးတွေလည်း သူသိပါတယ် ဟီးးးး.. :P..) သူ့အကြောင်းလည်း သူပြီးရင် ကျမအသိဆုံးပါကျမတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖုံးကွယ်တာ ထိန်ချန်တာ မရှိပါဘူး ပွင့်လင်းစွာ ပြောနေတိုင်ပင်နေကြပါ ကျမသူ့ ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ် တကယ်ခင်ပါတယ် တကယ်သံယောဇဉ် ရှိပါတယ် သူလဲကျမနဲ့ ထပ်တူနေမှာပါ..။။
ကျမစိတ်ညစ်စရာ ကိစ္စတိုင်း သူနားထောင်ပေးသလို သူ့ကိစ္စတိုင်းလည်း ကျမဝိုင်းခံစားပေးနေကြပါ သူရောကျမရော တနေ့မှာခွဲရမှာပါ သူလဲတချိန် သူ့ဗီယက်နမ်ပြန်မှာလေ ကျမလဲတချိန်မှာ ကျမအရမ်းပြန်ချင်တဲ့နေရာ တခုစီပြန်လာခဲ့မှာမို့လို့ပါ လူဆိုတာရေစက်ပါဘဲ သူအမြဲပြောနေကြပါါ""ငါတို့နှစ်ယောက်က မတူတဲ့ နေရာတခုစီက လာခဲ့ကြတယ် အခုဒီကျွန်းလေး သေးသေးလေးမှာ လာဆုံတယ်ဘယ်သူကကြိုသိမလဲ ဒီလိုဆုံမယ် ဒီလိုခင်သွားမယ်လို့ နောက်တော့လည်း မတူတဲ့နေရာနှစ်ခုစီကိုဘဲငါတို့ ပြန်ရမှာတဲ့ "" ဟုတ်ပါတယ်................
တနေ့သောအိမ်ပြန်ချိန်မှာ..ခွဲရမှာပါ အဲဒီအချိန်လေးကို ကြိုစဉ်းစားမိပြန်တော့လည်း ကျမစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။။
ဒီနိုင်ငံမှာရှိတြဲ့မန်မာ အချင်းချင်းက တယောက်ကိုတယောက် အဆင်းတွန်းနေကြပါ အလုပ်တူရင်ပိုဆိုးပါတယ်လေ ပြောရရင် မြန်မာပြည်ကလာတယ် ဆိုတိုင်းယုံလိုက်လို့မရပါဘူး ကျမကိုယ်တွေ့ နော်ကျမခံစားခဲ့ဖူးတယ်အဲကတည်းက မြန်မာပြည်က လာတယ်ဆိုရင် ယုံယုံကြည်ကြည် မပေါင်းရဲတာအမှန်ပါ ။ အခုပေါင်းနေတဲ့ မြန်မာသူငယ်ချင်း တွေလည်းရှိပါတယ် ခင်လဲခင်ပါတယ် ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရှိသလို ပါးပါးလေး ပေါင်းရတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ် ရောက်စကတော့ အသက်လည်း ငယ်သေးတော့ မြန်မာက လာတာဆိုတာနဲ့ အားကိုးတကြီးနဲ့ပေါ့လေ ကိုယ့်နိုင်ငံက လာတဲ့သူအချင်းချင်း ကူညီမှာဘဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပါ
(တကယ်ကူညီတတ်တဲ့ သူများလည်းရှိမှာပါ ကျမအဲလို လူတွေနဲ့မဆုံမိတာနေမှာပါ) ခုတော့လည်းစာတတ်သွားပါပြီလေ တကယ်ပြောတာပါ စင်ကာပူတို့ USတို့ ဂျပန်တို့မှာတော့ ဘယ်လိုလဲမသိဘူး ထိုင်ဝမ်မှာတော့ မြန်မာအချင်းချင်းသိပ်မယုံရဘူး ကျမကတော့ Lesson ပေးတာခံလိုက်ရဖူးတဲ့ သူဆိုတော့ nowayပါဘဲ လူတိုင်းကိုမယုံရဲပါဘူး အဲလိုလူတွေထဲမှာ ကျမသူငယ်ချင်းက ဖြူစင်ပါတယ် သူကလည်းပြောပါတယ် သူလဲ ဗီယက်နမ် သူငယ်ချင်းတွေထက် ကျမကိုပိုခင်တယ်တဲ့..။
ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး လွတ်လပ်ခြင်း ပွင့်လင်းခြင်းတွေဘဲ ရှိတာပါဒါပေမဲ့ မမြင်ရတဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်း ရှိတယ်လို့ ကျမခံစားမိတယ် အဲဒီကြိုးလေးကပါးပါးလေး
မျှင်မျှင်လေး တကယ်ကို သေးသေးလေးပါ သေးငယ်လွန်းပေမဲ့.. ခိုင်ခံတယ်.. ဖြူစင်တယ်
အရောင်တွေဆိုး ထားတာမရှိဘူး ။ ကျမကိစ္စတစ်ခုကြောင့် အရမ်းစိတ်ညစ် ဝမ်းနည်းခဲ့ရတုန်းက
ကျမကိုနားလည်စွာနဲ့ သူ့ ရင်ခွင်မှာ ကျမကိုပေးငိုခဲ့ပါတယ် ။ကျမတရုတ်လို ဗလုံးဗထွေးပြောတဲ့စကားတွေ
သူနားလည်လား မလည်လား ကျမမသိပါဘူး ကျမရင်ထဲ ခံစားနေရတာတွေကိုဘဲ ဖွင့်ဟနေမိတာပါ
သူ့ရှေ့မှာ မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျနေတဲ့ ကျမကိုသူ့ ရင်ခွင်မှာပေးငိုခဲ့ပါတယ် အရမ်းဝမ်းနည်းနေတဲ့
အချိန်မှာခိုလှုံစရာရင်ခွင်တစ်ခု တကယ်ဘဲ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကျမအဲဒီအချိန်မှာ သေချာသိလိုက်ပါတယ်။
သူစိတ်ညစ် ဝမ်းနည်းတဲ့အခါမှာလည်း ကျမသူ့အတွက် ရင်ဘတ်တစ်စုံငှားပေးခဲ့ပါတယ် သူ့ခံစားချက်တွေ
အခက်အခဲတွေကို အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေး ခံစားပေးခဲ့ပါတယ် သူ့ကိုကျမရင်ခွင်မှာပေးငိုခဲ့ပါတယ်..။။။
ကျမမြန်မာလို ပြောနေရင် သူနားထောင်ပြီး လိုက်ပြောတတ်ပါတယ် (သူပြောတာပီသားဘဲ) ကျမကိုသူဗီယက်နမ် စကားသင်ပေးဖူးပါတယ် ကျမကတော့သင်ပေးပြီးတာနဲ့ မေ့ပစ်လိုက်တာပါဘဲ နောက်နေ့သူဗီယက်နမ်လို ပြောရင်ကျမက ဟင် ဘာလဲ မသိဘူး လုပ်နေကြပါ တကယ်လဲမေ့ပါတယ် အဲ ဒါပေမဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာကို ဗီယက်နမ်လိုဘယ်လို ပြောလဲဆိုတာတော့ မမေ့ပါဘူး မှတ်မိပါတယ်..:P သိချင်သူများ မေးလို့ရပါတယ်း) သူကအကျီဝယ်ရင် အရောင်တောက်တောက် လင်းနေမှကြိုက်တာ ကျမကတော့ အရောင်ဖျော့ဖျော့လေး ခပ်မှိန်မှိန်အရောင်လေးတွေ ပိုသဘောကျတတ်ပါတယ် ညဈေးတူတူသွားရင် သူကဟိုဟာလေးလှတယ် ဒီဟာလေးလှတယ်ဆိုပြီး ကျမကိုအတင်းဝယ်ခိုင်းနေကြ သူနဲ့ဆင်တူဝတ်ရအောင်ပါ ။ကျမကလဲသူဝယ်သမျှ မလှဘူးဆိုပြီး လိုက်ဖျက်နေကြပါ. ကျမက Jean ဘောင်းဘီကြိုက်ပါတယ် သူကjeanလုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး ကျမကအကျီဆိုရင်နဲနဲပွပွ လွင့်လွင့်လေး ကြိုက်ပါတယ် သူက ဟိုပေါ်ဒီပေါ် ကြိုက်ပါတယ် ဖိနပ်ဆိုရင် ကျမကအပါးလေးတွေ စီးရတာကြိုက်တယ် သူကနဲနဲလေး မြင့်မှစီးတာပါ ကျမတို့နှစ်ယောက် လမ်းတူတူထွက်ရင် ကျမကခပ်ရိုးရိုး ပုံစံပေါက်နေပြီး သူကတော့ ခေတ်ဆန်ဆန် ပုံစံပေါက်ပါတယ် ကျမက နင်ကအမိုက်စား ပုံစံဖြစ်နေပြီး ငါကပုံတုံးနေတယ်လို့ ပြောရင် သူကနင်သေချာမှတ်ထား ယောက်ကျားလေးတွေက တချို့ကဟိုပေါ်ဒီပေါ် ဝတ်တာကို သဘောကျတဲ့သူရှိသလို တချို့ကဘာမှမပေါ်ဘဲ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်တာကို သဘောကျတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်ဟ နင်ရောငါရော50%စီပါဟာ လို့ ပြန်ပြောတတ် ပါတယ် (ကဲ..ဒီPost လေးဖတ်မိတဲ့ အမျိုးသားများ ဖြေပေးခဲ့ကြပါ သူပြောတာဟုတ်လားလို့..:P)..၊။
အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ကြိုက်တာခြင်းတူပါတယ် သူရောကျမရော. Pizza မကြိုက်ဘူး
MCdonalds kfc မကြိုက်ပါဘူး hotpot ကြိုက်တာခြင်းတူပါတယ် hotpot စားရင်သူကပုဇွန်မစားဘဲ
ကျမကိုဘဲပေးပါတယ် ကျမကြိုက်မှန်းသိလို့ပါ (ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းပါ) ကျမကသူ့ အတွက်
ကော်ဖီစပ်ပေးနေကြပါ ကျမဘာသာ စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်ထည့်ထားတဲ့ ကော်ဖီကိုသူကြိုက်ပါတယ်
အကြိုက်ချင်းတွေ တူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ ကျမတို့နှစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေပါ ကျမဒီနိုင်ငံ
ရောက်ပြီး ပထမဆုံးသူငယ်ချင်း ကသူပါဘဲ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းကလဲ သူပါဘဲ......။။။။
ကျမတနေ့ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါ တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ် ကျမဘဝမှာသူ့ လိုသူငယ်ချင်း
နောက်ထပ် တယောက်ရဖို့ ဆိုတာမသေချာပါဘူး သူအရင်ကျမကိုထားခဲ့မလား ကျမကဘဲသူ့ ကိုခွဲခဲ့ရမလား
မသေချာလှတဲ့ အနာဂတ်ကို မမှန်းဆချင်ပါဘူး ကျမဘယ်နေရာဘဲ ရောက်နေနေ သူဘယ်နေရာဘဲ
ရောက်နေနေ သူဟာကျမအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ ။သူ့အတွက်လည်း ကျမအကောင်းဆုံး
သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင် နေမှာပါ တကယ်လို့များ ကျမတို့နှစ်ယောက် အချိန်တန် အိမ်ပြန်လို့ ခွဲကြတဲ့အခါမှာ
သူ့ရင်ထဲမှာ ကျမပုံရိပ်လေး ရှိနေမယ်ထင်ပါတယ် ကျမရင်ထဲမှာလည်း သူ့ပုံရိပ်လေး ထင်ကျန်နေမှာပါ..။။
(မှန်ကန်သော စကားပါ အဲဒီပုံရိပ်လေးက တသက်လုံး အတွက်ပါ...) ။။။။။
(19.10.2010 AM 3:37)
Posted by blackroze at Saturday, October 16, 2010 16 comments
(16.10.2010 AM 3:19 )
Posted by blackroze at Monday, October 11, 2010 16 comments
မေးခွန်းတခုလောက်မေးပါရစေ... လူတယောက်ကိုလိမ်ဖူးပါသလား. ညာဖူးပါသလား
ဒီမေးခွန်းကို ကိုယ့်ဘာသာပထမဦးဆုံး ဖြေပါရစေ....
သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင် ဒါဟာဆိုးရွာနိမ့်ကျတဲ့ လိမ်ညာမှု့လို့ရောသတ်မှတ်သင့်ပါသလား?
ကျမအမြင်ပေါ့လေ မသတ်မှတ်သင့်ပါဘူး လူဆိုတာ လောကရဲ့အလိုကျ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့
အရုပ်လေးတွေပါ ဒါကြောင့်တခါတရံမှာ လ်ိမ်ညာဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေလိမ်ညာရပါလိမ့်မယ်..။
ငယ်ငယ်တုန်းကလူကြီးတွေက သင်ပေးတယ် လူကြီးတွေကိုမလိမ်ရဘူးနော် ငရဲကြီးလိမ့်မယ်တဲ့
အဲတုန်းကတကယ်ကြောက်ခဲ့ပါတယ် ငရဲကြီးရင်စာအုပ်တွေမှာပါသလို ရေနွေးပူတွေထဲအနှစ်ခံရမယ်
ဆီပူအိုးထဲထည့်ကြော်ခံရမယ်.. တကယ်ကိုယုံခဲ့ပါတယ် လိမ်လိုက်မိတာနဲ့ချက်ချင်းဘဲ
ဆီပူအိုးထဲ အထည့်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပါ နည်းနည်းကြီးလာတော့ သိလာတယ်..။
ငရဲကြီးတယ်ဆိုဘာလဲ တကယ်တော့.....မကောင်းတာကိုလုပ်ရင် မကောင်းတာပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်
ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါဘဲ မကောင်းတာလုပ်မိရင် မကောင်းတာပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့
မရည်ရွယ်ဘဲ လိမ်ညာမိသွားတာတွေ....ရှိတတ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ တခါတလေကျတော့လည်း....
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကို လိမ်ညာလိုက်ရတာတွေလဲ.....ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ..။
ကျမတို့အရွယ်မှာ လူတိုင်းမဖြူစင်နိုင်တော့ပါဘူးလေ ကိုယ်ကအေ၇ာင်ဆိုးတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်း
သူများတွေက အရောင်လာဆိုးတာခံလိုက်ရလို့ ကာလာဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါ ...
လောကကြီးကလည်း တခါတရံမှာ မဖြစ်ချင်တာတွေကို အတင်းဖြစ်ခိုင်းပြီး အရောင်တွေ
ငယ်ငယ်ကတခုလောက်များ လိမ်ထားမိရင် စိတ်ထဲမလုံပါဘူး
အမေကတချက်လောက် စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဲ အမေသိနေပြီလား မသိဘူးလေ ဆိုပြီး
အခုအရွယ်မှာတော့ အင်မတန်မှကိုပိရိစွာ...သေသပ်စွာ ပါးပါးလေးဖြစ်အောင် ပညာတွေတတ်နေပါပြီ
ဒါလောကကြီးကသင်ပေးလိုက်တာတွေပါဘဲ ...မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရတာလဲ ဘဝပါဘဲ
ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရတာလဲ ဘဝပါ ...ရည်ရွယ်ချက်လဲမရှိ မထင်မှတ်ဘဲ လိမ်လိုက်မိတယ်
ဆိုပါတော့ သူ့အတွက်လည်းထိခိုက်မှု့မရှိဘူး ကိုယ့်အတွက်လည်း ထိခိုက်မှု့မရှိတဲ့ လိမ်ညာမှု့ကို
အပြစ်ရှိတဲ့ လိမ်ညာမှု့လို့ပြောနိုင်ပါသလား ......
သိချင်နေတာတော့ကြာပါပြီ ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်း အဖြေမထုတ်တတ်ဘူး......
တခါတလေမှာ လိမ်ညာတာမဟုတ်တော့ဘဲ.....ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မုသားပြောလိုက်ရတဲ့ အခါတွေလည်း
ခုနေခါကျမကိုလိမ်ဖူးလား ? ညာဖူးလား မေးခဲ့ရင် လိမ်ဖူးတယ် ညာဖူးတယ်လို့
အမှန်အတိုင်းဖြေမှာပါ ....နောက်ထပ်ရောလိမ်ဦးမလား ..ညာဦးမလားမေးရင်...
(11.10.2010 AM- 2:57 )
space bar ခြားထားတယ်..ဘာလို့များစာလုံးတွေကပြန်ပြန်စေ့သွားလည်းမသိဘူး
ကုသိုလ်ကံကလဲနော်...Blog ရေးတာချင်းတူတာတောင်ကျမအဖြစ်ကspace bar ခြားလို့မရတဲ့အဖြစ်
ကျမကိုသင်ပေးတဲ့ ဆရာလဲတော်တော်ကိုစိတ်ညစ်နေလောက်ပြီလေ :(
Posted by blackroze at Saturday, October 02, 2010 15 comments
ဝယ်လာတာတွေ.... သူ့အကိုတွေယောင်းမတွေက အမေရိကားမှာ အများကြီးရှိတာ.... အသီးစားရင်အသားအရေလှတယ်....သူ့အသားအရေလှတာ သူအသီးများများစားလို့ပေါ့ အစရှိသဖြင့်....သူ့အသားအရည်ကဘယ်လိုလှပဆိုပြည်တာ.....အစရှိသဖြင့်ပါ...
(အသီးစားရင်အသားအရေလှတယ်လို့ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ် နောက်ဆက်တွဲပါလာတာတွေကိုတော့ တမျိုးပေါ့လေ)
သူတပါးကိုဝေဖန်ရေးလုပ်တာကိုတော့ ကျမတို့သူငယ်ချင်းတွေလက်မခံချင်ပါဘူး အထူးသဖြင့် ဟိုလူကဘယ်လို ဒီလူကဘယ်လိုဆိုပြီးစပြောရာကနေ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူသာလျှင်အတော်ဆုံး သူသာလျှင်အသိဆုံး ဆိုတာနဲ့ပြီးသွားတာများတယ်ဆိုပါတော့ ...
မြန်မာစကားပုံကြားဖူးကြမှာပေါ့...မချစ်သော်လည်းအောင့်ခါနမ်း ဆိုတာလေ ကျမတို့ကတော့
အောင့်ပြီးနမ်းရတာများလွန်းလို့ အင်မတိအင်မတန်မှကို စိတ်ညစ်နေမိကြောင်းပါ....
တခါတခါ ဟိုဘဲလေးကအမိုက်စား ဒီဘဲလေးကအမိုက်စား...ဆိုတာလေးတွေကလည်း ညဘက်ကြားကားဆွဲသလိုကြားဖြတ်အစီအစဉ်အနေနဲ့ ပါလာသေးတာသိတယ်မှတ်လား...
(ဟင်းးဟင်းးးးဟင်းးး) အဲလိုအခါမျိုးများဆိုရင်လေ..........ကျမကတော့မရီမိအောင်နှုတ်ခမ်းကိုက် လျှာတွေကိုက်ယုံတင်မကဘူး ဘေးနားကသူငယ်ချင်းတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်
ခုံအောက်ကနေ ပေါင်ကိုဆွဲဆိတ်ပေးရပါတယ်...အင်းးးးးးးး Jeanဘောင်းဘီတွေဝတ်တာများတော့ ဆွဲဆိတ်ပေးရတဲ့လူလဲမသက်သာဘူးရှင်...လက်တော်တော်နာတာ...တခါတခါ မရီမိအောင်
ထိန်းနေရင်းကနေ.....ခွီးးးးးးးခနဲအသံထွက်မိလို့ထမင်းသီးသလိုလို ဘာလိုလိုလုပ်လိုက်ရတာလဲ ရှိပါ့တော်...
တခါတခါတော့လည်းသူပြောပြတဲ့.....အကြောင်းတွေကနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်....ကျမတို့အလုပ်က အရာရှိတွေက....အရင်ကဘယ်သူကဘယ်လို....ဆိုတာမျိုးပေါ့....အဲဒါလည်းပြောရရင်တော့အတင်းပါဘဲလေ ....ဒါပေမဲ့ဒီအတင်းကတော့ကျမတို့အားလုံးသိချင်တဲ့ သတင်းဟောင်းလေး
တွေပါဘဲ ..လူတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ.... သူသိလားမသိလားတော့မသိပါဘူး..သူ့အတွေးထဲမှာ
(စာရိုက်ရင်ခုထိ space bar ခြားလို့မရတာကလည်းဆိုးပါ့နော် ..ကျမကဘဲအသုံးမကျလွန်းတာလားမသိပါဘူး)
(2.10.2010 AM-3:41 )